ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/21/12
အညတရသူရဲကောင်းဆု ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် အလှူရှင်စာရင်း
ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် အလှူရှင်စာရင်းအား ပေးပို့အပ်ပါသည်။(ပူးတွဲပါဖိုင်တွင် ကြည့်ရှုပါရန်)
ဤ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းနှင့်သော်၎င်း၊ ဤ ဆုချီးမြှင့်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍သော်၎င်း
မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာဖြင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်း၊ စစ်ဆေးမေးမြန်း နိုင်ပါကြောင်းနှင့်
ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့၏ ဝေဖန်အကြံပြုမှုများသည် ကျနော်တို့၏ လုပ်ငန်းအတွက် အထောက်အကူတခု၊
တွန်းအားတခု ဖြစ်စေပါသောကြောင့် ဝေဖန်အကြံပြု ပေးကြပါရန်ကိုလည်း
တတိယအကြိမ်မှ လက်ကျန်ငွေ ၂၇၂,၈၀၀ ယန်း (နှစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ရှစ်ရာ) ယန်း တိတိအားစတုတ္ထအကြိမ်အတွက် ဆက်လက် ထည့်သွင်း သုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ပြီး
ကော်မတီအနေဖြင့် စတုတ္ထအကြိမ် ဆုချီးမျြင့်နိုင်ရေးအတွက် အရှိန်အဟုန်မပျက်
ဆက်လက်ကြိုးပမ်းေ ဆာင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၅.၈.၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေ) နေ့တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် အညတရသူရဲကောင်း ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားတရပ်
အား ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားရန်ရှိပြီး၊
၁၂.၈.၂၀၁၂ (တနင်္ဂနွေ) နေ့တွင် ရန်ပုံငွေအတွက် အပန်းဖြေ ခရီးစဉ်တခုအား
စီစဉ်လျှက်ရှိပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး အကြောင်းအပ်ပါသည်။
ခူးလိုသူတွေထက် စိုက်ပျိုးလိုသူတွေ များမှ
အသာကိုမှစံလိုသူတွေထက် အနာကိုမှခံလိုသူတွေ များပါမှ
စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသူတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ဂုဏ်ပြုရင်း
အမိတိုင်းပြည်အတွက် လိုနေတဲ့ ကွက်လပ်တခုကို
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက်
Donor List and Account Clarification 3rd Time (21.6.2012) Last1tw
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:34 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 6:04 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:55 PM No comments:
လက်ရှိ အစိုးရ ဟာ လုံးဝ မရိုးသားတဲ့ အပြင် ဘယ်လိုပဲ “ဒီမိုကရေစီ” နာမည်တပ်တပ်၊ ဘယ်လိုပဲ “ဒီမိုကရေစီ” အရေခြုံခြုံ၊ ဘယ်လိုပဲ “ဒီမိုကရေစီ” လမ်းကြောင်းကို သွားနေပါတယ် လို့ပဲပြောပြော
နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာရှင်လမ်းကြောင်း ကို ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဘက်ဂီယာထိုး ဆုတ်ခွာသွားနေပြီ ဆိုတာ ဒီနေ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေက ပြလို့ နေပါပြီ။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရဲ့ ရလာဒ်ဟာ ၉၀ ရလာဒ်လိုပဲ စစ်အုပ်စု ကို အရှိုက်ထိ၊ အငိုက်မိ သွားခဲ့ရတဲ့ ရလာဒ် တခုပါ။ ၉၀ တုန်းကလည်း ဒီလောက်တော့ ပိုးစိုးပက်စက် ရှုံးလိမ့်မယ် မထင်ခဲ့ပေမယ့်၊ ရှုံးခဲ့တယ်။
ခုတခါ နှစ် ၂၀ ကျော် အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ခံတပ်ကြီးတွေ၊
ကတုတ်ကျင်းတွေဟာ နာရီပိုင်းအတွင်း ကျရှုံးလိုက်ရတဲ့ စစ်ပွဲ တပွဲ
ကို မျက်ဝါးထင်ထင် ကြုံတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ မစားရတဲ့ အမဲ သဲ နဲ့ပက်၊ မင်းသားကြီး မလုပ်ရရင် ပတ်မကြီးကို ထိုးဖေါက်တယ် ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်မျက်နှာကို မထောက်၊ ပြည်သူမျက်နှာကို
မထောက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို တခု ပြီး တခု သာ ကျူးလွန်တော့တယ်။
သိသာလွန်းတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို သိသိသာသာပဲ ဖန်တီးပြီး လူတွေသေကြေကြ၊ အိမ်ရာတွေ မီးလောင်ကြ တဲ့ ရက်ပိုင်းလေး တော်တော်
ကြာအောင် အစိုးရဟာ ငြိမ် နေခဲ့တယ်။
ဒီလို ငြိမ်တာမျိုးဟာ ၂၀၁၀ တုန်းကလည်း ဖုံးမနိုင်၊ ဖိမရ တခါငြိမ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဒီတခါမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ဦးရွှေမန်းတို့ကို နောက်က အုပ်စုတစု က ချုပ်
ကိုင်ထားလိုက်ပြီ လို့တောင် ကျနော်ထင်ခဲ့မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ရက်အနည်းငယ် ကြာတဲ့အခါမှာ (သူပျောက်နေတာကို ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေ များလာတဲ့အခါမှာ) လူလုံးထွက်ပြပြီးသွားတယ်။
အပြုသဘော ကို သွားနေပါတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်တော့ပါဘူး တွင်တွင်ပြောနေတဲ့ အစိုးရဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ နိုဘယ်လ်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား၊ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားအကြောင်းတွေကို စုိးစိမှ ဖေါ်ပြ
ခြင်း မပြုသလို၊ အင်မတန် လူကြီးလူကောင်းဆန်ပါတဲ့ ပြန်ကြားရေး ညွှန်ချုပ်
ကြီးကလည်း ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် ကို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာမှာ ပေါက်ကွဲ
တကယ်တော့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါ ကို ဒီလောက်ထိ သူတို့ တွက် ထားဟန်မတူပါဘူး။
ဒီလူတွေဟာသိပ်မကြာသေးခင် လ ပိုင်းကလေးကမှ သူတို့ အင်မတန်မှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လို ပါကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားများ
ဖြစ်ပါကြောင်း (ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း က အစ) သူတို့ ကို လူတွေ က အထင်အမြင်မှားနေကြောင်း ဖရိုဖရဲ ပြီတီတီ အပြုံးတွေနဲ့ သတင်း စာနယ်ဇင်း မျက်နှာတွေမှာ အတိအလင်း ပြောခဲ့တယ်။
ခု အဲဒီ ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံးတွေကို ဟန်တောင် မဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ကွာ ကျခဲ့ရတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ လက်ရှိအစိုးရ ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ အရင် စစ်အစိုးရ ရဲ့
ခြေလှမ်းတွေ အတိုင်းပဲ တထပ်တည်း ကို တူ ပါတယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဟာ သူတို့ ပြန်ပေးဆွဲ မခံထားရကြောင်း သက်သေ ထူတဲ့
အနေနဲ့ ဒုတိယမိန့်ခွန်း ကို ကာလံဒေသံ ဘာမှ မအပ်စပ်ပဲ ပြောသွားတယ်။
တချိန်တည်းမှာ အဲဒီမိန့်ခွန်းဟာ ကြံ့ဖွံ့စစ်အာဏာရှင်တွေ ရဲ့ မစားရ၀ခမန်း အိပ်မက်တွေ ကို ဖုံးမနိုင်ဖိမရ ပေါ်လွင်နေတယ်။
ကြံ့ဖွံ့စစ်အုပ်စုတွေဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရလာဒ်ကို ပြန်မေ့နေတယ်။ အဲဒီတုန်း က ကြိုတင်မဲတွေနဲ့ မဲလိမ် မဲခိုး မှု တွေမလုပ်ရင် ခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ သိပ်မကွာတဲ့ အခြေအနေ
ကို ရခဲ့တယ် ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။
တစည နဲ့ ၂ ပါတီတည်း ပြိုင်တဲ့ နေရာမှာတောင် တစည နိုင်ခဲ့တယ်။
၂၃ နှစ်လုံးလုံး လမ်းတွေ၊ တံတားတွေ၊ ဆည်တွေ ဘယ်လောက် ဖေါက်ခဲ့
ပါကြောင်း အပ်ကြောင်းထပ်အောင်ပြော၊ နောက် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှာ
ဇွတ်အတင်း လမ်းတွေ ခင်းပြ နဲ့ သရုပ်ပျက်ခဲ့တဲ့ တိုင် ပြည်သူရဲ့ အော့နှလုံး
နာ မှု ကို သူတို့ ပြန် အဖတ်မဆည်နိုင်တော့ဘူး။
ခုလည်း မစားရ၀ခမန်း စီမံကိန်းတွေကို ပြောပြီး “ဒါတွေ ရှိပါတယ်” လို့
ချစ်တီးကုလားက ခြေကျင်းတွေ၊ လက်ကောက်တွေ တပြပြ ချစ်ရေးဆို သလို
ဆို မဆုံး လုပ်ပြန်ပြီ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ပြည်သူ ကို စည်းရုံးနေသလို တဘက်က
ရိုဟင်ဂျာရေးနဲ့ တပ်မတော်ဟာ ဘယ်လောက် အနစ်နာ ခံ၊ ဘယ်လောက် တန်ဖိုးကြီး အရေးကြီးပါကြောင်း “ပြ” နေပြန်တယ်။
တချိန်တည်းမှာလည်း သူတို့ စ ခဲ့တဲ့ ဒီမီးကို ဆွဲ ပြီး မျက်ဖြူဆိုက်လေ ဆရာကြိုက်လေ စီမံကိန်းနဲ့ ပြည်သူကို အကြပ်ကိုင်နေတယ်။
ဒါပေမယ့် တချိန်တည်းမှာကို သူတို့ရဲ့ အတွင်း အဇ္ဈတ္တကနေ ဖုံးမရ၊ ဖိမရ၊
ယောက်ျားရင့်မာကြီးတွေတန်မဲ့ ပူလုံးကြွ လာတဲ့ ဣဿာ မစ္ဆရိယ တွေက
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ပေါ်လို့နေတယ်။ ရှေ့က ဘယ်လို ဟန်ဆောင်ထားထား၊ နောက်က အစွယ်တွေ ကို ဖုံးမနိုင် ဖြစ်နေပြီ။
ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေရဲ့ ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ ပြည်သူ့သွေးကို မျက်ရည်ကို ခင်း
ပြီး သူတို့ အာဏာအတွက် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ်းကြောင့် ပြည်သူအများစု
ဟာ သူတို့လိုသလို ဖန်တီးရာနောက် ကို ပါသွားရတယ်။
ခုချိန်မှာ ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးရွှေမန်းတို့ဟာ ပြန်ပေးဆွဲ ခံနေရတာလား၊
ဒါမှမဟုတ် တကြိတ်တည်း တဥာဏ်တည်းပဲ လား ဆိုတာ
သေချာ စိစစ် သုံးသပ်ပါ။ လက်တွေ့ ကျကျ စဉ်းစားပါ။
စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကချင် ကေအိုင်အေတပ်ဖွဲ့ တွေကို လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေ နဲ့ တပ်မကြီးတွေ အမျိုးမျိုး ထိုးစစ် ဆင်နိုင်တဲ့ တပ်၊
မဲသဝေါ၊ မာနယ်ပလော တကယ့် အခိုင်အမာ ကေအန်ယူစခန်းကြီးတွေကို
တိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ တပ်၊ အဲဒီ လို တပ်ရင်းတပ်မကြီးတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ တပ်မတော်ကြီးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် ထဲမှာ ဟိုမှာ ရွာလုံးကျွတ် ဘင်္ဂလီတွေ ၀င်မီးရှို့သွားသတဲ့၊ ဒီမှာ ခေါင်းဖြတ်သွားသတဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာ ရတာ ဘာမှ မဆိုင်သလို ပဲ။
ရခိုင်ပြည်ရောက် သတင်းထောက်တွေ ရဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ်ပါ။
ဘင်္ဂလီတွေမှာ သေနတ်ဘယ်နှလက်များ ပါနိုင်မလဲ။ တုတ်တွေ၊ ဓါးတွေ၊
ဓါတ်ဆီပုလင်းတွေနဲ့ သာ သောင်းကျမ်းနေတယ်။
စစ်တပ် က နည်းနည်း ၊ လုံထိန်း က မလောက်မငှ နဲ့ လို့ သတင်းတွေ ဖတ်နေရတယ်။
အာဏာ ကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဒီလို မသမာတဲ့နည်း နဲ့ ပြည်သူ့သွေး
ကို မြေကျအောင်၊ လူမျိုးခြား ၊ ဘာသာခြားတွေ ဆီမှာ အစော်ကားခံရအောင်
လုပ်နေတယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ ဒီအာဏာကို လက်လွှတ်ရချိန်နီးပြီ၊ ခင်ဗျားတို့ဟာ ကမ္ဘာမှာ ရှိရှိသမျှ အာဏာရှင်တွေ ကျဆုံးခဲ့သလို၊ ကျဆုံးဖို့
အရမ်းနီးကပ်လာပြီ လို့ပဲ သတိပေးမယ်။
ဆဒမ်ဟူစိန် တို့ နောက်ကို လိုက်ဖို့ သာ ပြင်ထားကြတော့ လို့ အတိအလင်း ပြောချင်တယ်။ ဒီတခါ ခင်ဗျားတို့လုပ်ရပ် ပေါ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ပြည်သူက ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို လှည့်စား လှည့်စား လက်ခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:44 PM No comments:
ဧရာဝတီ ဒိတ်လိုင်း DATE LINE သတင်း ဆွေးနွေးပွဲ သတင်း
ကိုအောင်ဇော် ကိုလင်းသန့် နှင့် ကိုခက်ထန်တို့ ဆွေးနွေးကြပါတယ်..။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:37 PM No comments:
အောက်စ်ဖို့ဒ်က မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားပြောနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:28 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:17 PM No comments:
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ပဋိပက္ခတွေ ငြိမ်သက်နေပြီလို့ ရေးသား တင်ပြနေသော်လည်း
တကယ့်လက်တွေ့တွင်မှု မတည်ငြိမ်မှုများ၊ မီးရှို့မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
ယမန်နေ့ညကပင် စစ်တွေမြို့တွင် ၀န်ထမ်းတဦးလည်းဖြစ်သည့် ဘင်ဂါလီ အမျိုးသမီးတဦးက မိမိနေအိမ်ကို မီးရှို့မှုဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ က ဖမ်းဆီးမိလိုက်ကြောင်း ဒေသခံ မျက်မြင်များက ပြောပါတယ်။
အလားတူ အခြား နေရာများတွင်လည်း အုပ်စုချင်း တိုက်ခိုက်မှုများ၊ မီးရှို့မှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ မျက်မြင်များက ဆိုနေကြပါတယ်။
ဒီကနေ့ သတင်းစာ ဖော်ပြချက်မှာတော့ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်ဒေသက မီးရှို့မှု မဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျေးရွာ ၁၀ ခု စာရင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရောက်တဲ့နေတဲ့ အဲဒီရွာတွေက ဒေသခံများကို ပြန်ပို့ပေးနေပြီ လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျန်ရှိနေသူတွေကိုလည်း မကြာမီအချိန်အတွင်း နေရပ်ပြန်နိုင်အောင်လို့ စီစဉ်ပေးနေပါပြီ တဲ့။
Thursday, June 21, 2012 အိမ့်သံစဉ်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:22 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကို နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောခဲ့ ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံက နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥရောပနိုင်ငံကို ခရီးထွက်ခဲ့ ပါတယ် ။
နှစ်ပေါင်း-၂၄-နှစ်အတွင်းမှာ ပြည်ပနိုင်ငံကို ထွက်ခွာခဲ့ တာဖြစ်ပြီးနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုလဲ လက်ခံယူခဲ့ ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အ ခန်းအနားနဲ့ဖိတ်ကြားပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာ
ခုအချိန်မှာကမ္ဘာကအာရုံစိုက်လာကြရပြီဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မျိုးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ 
ပြသနာနဲ့ အဓိကဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေရဲ့ ကမ္ဘာတခုလုံးကို လိမ်လည်လှည့်ဖျား ထားတဲ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာကို
အသိအမှတ်ပြုပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသတင်းထောက်တွေက မေးပါတော့တယ် ။ ဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲဒီလို
နာမည်နဲ့လူမျိုးကို သိတောင် မသိဘူးဆိုပြီး အခုလို ဖြေကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့ ကြောင့် သမိုင်းလိမ်ဘ၈င်္လီလူမျိုးတွေရဲ ပြသနာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလို ဖြေရှင်းလိုက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဒီပြသနာဟာ
ဘယ်လိုမရှေ့ဆက်ခရီးသွားလို့မရတော့ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် -၈၈- မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ၊
ဦးတင်ဦး ( ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်း -NLD ) ၊သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ။ စာရေးဆရာ ဦးအောင်သင်း တို့ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးက
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေက လက်မခံကြတာကိုထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားကြပြီးပါပြီ ။
သတင်းထောက်အားပြန်လည်ဖြေကြားချက်ကို ( ဆီလျှော်အောင် ) ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။။
Daw Aung San Suu Kyi answered "I do not know because when you talkabout the rohingya, we are not quite sure who
you are talking about.As I said there isaproblem about who we are referring to. There issomeone who say that those
people who claim to be rohingya are not theones who are actually native to Burma. But who are just come over
recently from Bangladesh. But, on the other hand, Bangladesh say "no". They don’t want them as refugees because
they are not native toBangladesh and they come over from Burma. So how do we sort this out?
Without rule of law, without proper Immigration processes, withoutproper policy, without appropriate implementation of the
law. This iswhy I said the root of all this is the rule of law going back to manydecades, not going back just to the crime
that is just admitted acouple of months ago."
( သူတို့ ( ရိုဟင်ဂျာ ) တွေရဲ့နိုင်ငံသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဖြစ်သင့်ပါသလည်း…နိုင်ငံသားဟုတ်လား..မဟုတ်ဘူးလား ( ရှေ့က
Citizenship ကိုရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်ပါသည် )
ဖြေ….ကျမ မသိဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့..အခု ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးရှင်ပြောနေတာကို ကျမ မသိတာ။ ရှင် ဘယ်သူ
အကြောင်းပြောနေတာလည်း ဆိုတာကိုကသေချာမှု့မရှိလှဘူး. ကျမပြောခဲ့သလိုပဲ…ကျမတို့ရည်ညွန်းပြောဆိုနေတဲ့သူတွေအတွက်
ပြသနာတော့ရှိနေတယ်..။..ရိုဟင်ဂျာ ပါလို့အခိုင်အမာပြောနေတဲ့သူတွေ်ကိုက မြန်မာနိုင်ငံဖွား ဇာတိချက်မြုတ်မှ မဟုတ်တာ။
သို့သော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကျော်ဝင်လာသူတွေက ဘယ်သူတွေလည်း။တဘက်ကလည်း( ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုဆိုလိုသည် )
မဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သူတို့ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ်လက်မခံခြင်ဘူး။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလားနွယ်ဖွား
လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမပါပဲ ၊ သင့်တော်တဲ့မူဝါဒတွေမရှိပဲ..သင့်တော်မဲ့ ဥပဒေတွေကို အကောင်ထည်ဆောင်ရွက်မှု့မရှိပဲ
….ဒီပြသနာတွေကို ကျမတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလည်း။ ဒါတွေရဲ့အရင်းမြစ်အကြောင်းတရားဟာ..ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နောက်ပြန်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာ ကျမပြောခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့်လအနည်းငယ်လောက်က ၀န်ခံထားခဲ့တဲ့
ကဲ- ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအစိုးရများက လေးစားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီလိုသမိုင်းလိမ်လူမျိုးတွေ
အကြောင်းကိုဘာမှမသိဘူးလို့ဖြေရှင်းပြောဆိုလိုက်တာဟာ တနည်းအားဖြင့် ဒီပြသနာကိုပြီးမြောက်သွားစေတဲ့ 
သမိုင်းဝင်တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ စကားတရပ်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအချိန်ဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ တကွဗုဒ္ဒဘာသာမြန်မာနိုင်ငံသူများ
တွေအဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့( ၆ရ )မြောက်မွေးနေ့ မှာ သက်တော်ရှည်ကျော် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့မွေးနေ့ ဆုမွန်
တောင်းကြပါစို့ လား ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:05 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:56 AM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:53 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ် မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြင့်သည့် ဓါတ်ပုံ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်များ
အမေစုဒေါက်တာဘွဲ့ လက်ခံသည့် မိန့် ခွန်းမှတ်တမ်းများ...။
ဓါတ်ပုံ..အစ်ကို ကျော်ဇွာမြင့် .. အစ်မကြီး Helen Ayekyaw
Aung San Suu Kyi has received an honorary degree from the University of Oxford
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ် မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြင့်သည့် ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း